I-Kaprovani "I-Silver Sands" Indlu yaseLwandle<>50M ukuya eLwandle!
Shekvetili Kaprovani, Guria, Georgia
Indawo iyamangalisa, ifanitshala yonke intsha, iyilwe kwaye ifakelwe, izixhobo ezitsha zibandakanya idishwasher, imicrowave, itoaster kunye nomenzi wekofu.
Siyazingca ngakumbi ngezinto ezikhanyayo kwigumbi lokuhlala, ezenziwe ngononophelo olukhulu ukusuka kwiminyaka engama-200 ubudala. Indlu inamagumbi amabini okulala ahlukeneyo, ngalinye linebhafu yalo kwaye lilungele iintsapho ezimbini okanye iqela labahlobo. Siyathemba ukuba indawo eyodwa, ukuzola kunye neSilver Sparkling Sands ziyakwenza ukuba ubuyele kule ndawo ngokuphindaphindiweyo!
Sirenta amabali amabini, angekho makhulu kakhulu, kodwa ubukhulu becala (140sqm) indlu eneyadi eluhlaza eyi-250sqm kwiVillage Caprovani, eGuria, malunga ne-50M ukuya elwandle olunesanti. Ukuba ujonge indawo yokonwabela ilanga, isanti, impepho yolwandle kunye nokumamela iintaka eziculayo kunye nezandi ezifanelekileyo zamaza olwandle, le yindawo yakho!
Umgangatho wokuqala ubonelela ngekhitshi lesicwangciso esivulekileyo kunye nendawo yokuhlala equkuqela ngokwendalo ukuya kwithafa elikhulu, apho undwendwe lunokonwabela ikofu yasekuseni okanye luqokelelene malunga netafile kwisidlo sangokuhlwa emva kosuku oludinisayo lokutshisa kwelanga.
Ikhitshi ixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba, isomisi (iluncedo kakhulu kwimozulu :) imicrowave, itoaster, iinkomo zombane,
Kunye nentaphane yezitya kunye nezixhobo ezigqitywe ngomgangatho ophezulu weembiza ezinganamatheli kunye neepani zobukhulu obahlukeneyo. Yonke into yokupheka kamnandi.
Izitepsi ezimbini ezahlukeneyo ziya kukusa kumgangatho wesibini, kumagumbi okulala. Nganye inegumbi layo lokuhlambela kwaye ijonge kumnyama oluhlaza :)
Ubumelwane buzolile, bunomthunzi ngomgca wemithi yepine, enezindlu ezininzi zabucala kunye nehotele enye encinci enendawo yokutyela.
Uya kuba nemfihlo epheleleyo, kodwa siya kuhlala siqhagamshelwe kwaye sithumele nje i-imeyile, i-massage, okanye umnxeba kude.